Manicure miaraka amin'ny lasopy
Manicure miaraka amin'ny bouillon dia malaza mandritra ny fotoana maharitra. Ny kavina kely mareva-doko dia manome ny hohony amin'ny endrika tsy mahazatra sy tany am-piandohana. Ny fanapaha-kevitra toy izany amin'ny manikika dia tsy afaka ny tsy ho voamarikao, fa mila manantitrantitra ny fahaizan'ny tompony. Ankehitriny, ny endriky ny kavia dia mora ny manao trano miaraka amin'ny tananao manokana. Na izany aza, ireo tompokovavy manikika dia afaka mahavita sangan'asam-peo tena izy amin'ny alalan'ireo voaly tsara tarehy.
Ny fisafidianana ny tantely amin'ny saha, tokony ho takatrao ny fahasamihafan'io rindran-damina io eo amin'ny fantsika natao tao an-trano sy tao amin'ny salon. Mety ho sarotra amin'ny fampiharana ireo kofehy mena midadasika ve izany? Na izany aza anefa, ny fampihetseham-po toy izany dia manintona ny masonao amin'ny teoria. Amin'ny fampiharana, afaka manara-maso ny valiny hafa ianao.
Loko misy bouillon . Ny fomba tsotra indrindra hahatonga ny tenanao manamboatra caviar dia ny mividy ny varotra efa vita vita amin'ny bouillon. Na izany aza, aoka ho vonona amin'ny zava-misy fa ny endrika toy izany dia tsy misy fahasamihafana tanteraka ary ny tsy fahampian'ny fihenam-bolo sy ny hoditra dia voamarina. Na izany aza, raha manana tanana tsara ianao, dia manana fahafahana hanao zava-mahadomelina tsy mahazatra, miaraka amin'ny ezaka kely indrindra sy fandaniana.
Shellac amin'ny ronono . Ny fitsidihana ny salon beauty, ny manicurist dia hanome anao shellac lamaody amin'ny bouillon. Tsy azo atao ao an-trano ny endrik'izy ireo toy izany, satria ilaina ny fitaovana sy ny fahaizana manokana. Ny jiro dia napetraka amin'ny alàlan'ny jiro manokana sy jiro ultraviolet. Amin'io tranga io dia miraikitra amin'ny gel koa ny fantsika. Noho izany, raha tsy vonona ny hampitombo ny fantsika ianao, dia tsy natao ho anao izany.
Fanoloran-kevitra manitikitika miaraka amin'ny lasopy . Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Maingo, fa miaraka amin'izay dia misy poti-jiro tsotra mijery ao amin'ny manicure monophonic, manamboatra rantsana iray na roa. Manolotra saha iray amin'ny voaozona manontolo ianao, dia hanao drafitra tsara tarehy miaraka amin'ny voka-dratsin'ny 3D. Fa ny tsara tarehy indrindra dia manicure miaraka amin'ny loko avy amin'ny roja, izay azo atao amin'ny traikefa sy ny fahaiza-manao.
Fanangonana fiaramanidina 2013
Frantsay manicure 2015
Manicure dia lohahevitra an-dranomasina
Inona no akanjo amidy ankehitriny amin'ny 2014?
Hatsikana - Fiantsoana 2015
Fehiloha lava - fararano 2013
Ahoana no handrafetana vilany mafana?
Synaesthesia - tranga misy fihetseham-po mifangaro sy fahatsapana
Ahoana no haka spermogram?
Rahoviana handavaka lavaka lehibe?
Tao amin'ny tranon'i Michael Jackson dia nahita pelaka ankizy
Inona no nofinofin'ny rano?
Calibraroa fambolena sy fikarakarana - ny tsy fahampian'ny fambolena sy fiahiana ao an-trano
Fingotra amin'ny tanana manokana
Ahoana ny fanangonana ny angidina ho an'ny kibab shish?
Fanandramana hafa nataon'i Eva Mendes sy Ryan Gosling hanorina fifandraisana tsara dia hiafara amin'ny fanambadiana?